कसरी छिटो तौल घटाउने - Victor Mochere
वजन घटाने अवस्थाहरू मध्ये एक हो जुन धेरै मानिसहरूले प्राप्त गर्न संघर्ष गर्छन्। जे होस्, तपाइँले वांछित परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ कि भनेर तपाइँले प्रयोग गर्ने रणनीतिहरू हुन्। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जसले चाँडै तौल घटाउन चाहन्छ, जसमा (तर सीमित छैन): आगामी शल्यक्रिया, डाक्टरको सिफारिस, वा आगामी घटना वा छुट्टीको लागि पनि। यद्यपि, तौल घटाउनु अक्सर ढिलो महसुस हुन्छ, र त्यो निराश हुन सक्छ। धन्यबाद, त्यहाँ धेरै स्वस्थ तरिकाहरू छन् जसले तपाईंलाई क्र्यास-डाएटिंग वा तपाईंको स्वास्थ्यको त्याग नगरी वजन घटाउन मद्दत गर्दछ।
यहाँ छिट्टै तौल घटाउने उपायहरू छन्।
1. तपाईंले के खानुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्
१. आफ्नो खाने बानी परिवर्तन गर्नुहोस्
3. खाना अघि एक स्याउ खानुहोस्
4. आफ्नो खानाको लागि अनलाइन किनमेल गर्नुहोस्
5. बिहान अण्डा खानुहोस्
6. कसरत पछि दूध पिउनुहोस्
7. आफ्नो मेटाबोलिज्म बढाउनुहोस्
8. कम क्यालोरी डेयरी उत्पादनहरू खानुहोस्
9. आफ्नो खानामा चुकंदर थप्नुहोस्
तौल घटाउनु भनेको तपाईले के खाइरहनु भएको हो र तपाईलाई के खाइरहेको छ भन्ने होइन। सधैं खानेकुरा र स्न्याक्सहरू खानुहोस् जसलाई खानको लागि अलिकति प्रयास चाहिन्छ किनभने तिनीहरूले स्वचालित खाना कम गर्दछ। खाना खानु अघि शेल गर्न आवश्यक खानेकुराहरूले ठूलो मात्रामा क्यालोरीहरू खपत गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई थोरै तौल घटाउन मद्दत गर्दछ।
अनुसन्धानका अनुसार, नियमित रूपमा बिहानको खाजा खाने मानिसहरूले त्यसपछिको खानामा धेरै खानेकुरा खान्छन्। यसले तौल बढेकोमा अनुवाद गर्छ। आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नुहोस् र नियमित रूपमा बिहानको खाजा खाने बानीलाई तोड्नुहोस्। यो एक गाह्रो काम हुन सक्छ तर अन्ततः, यसले तपाईंलाई पछ्याउने खानाहरूमा कम खाना खान मद्दत गर्नेछ र बदलामा यसले तपाईंलाई केही तौल घटाउन मद्दत गर्नेछ।
अनुसन्धानका अनुसार स्याउले GLP-1 नामक हर्मोन उत्पादन गर्छ जसले मस्तिष्कमा पठाइने भोकको चेतावनीलाई कम गर्छ। तसर्थ यदि तपाईंले खाना खानु अघि स्याउ खानुभयो भने, तपाईंले खानामा उपभोग गर्ने सम्भावना रहेको क्यालोरीको प्रतिशत कम हुन्छ। जति कम क्यालोरी खपत हुन्छ, त्यति नै तौल घट्छ।
तपाईं जहाँ भए पनि अनलाइन स्टोरबाट खाना किनमेल गर्न सल्लाह दिइन्छ। खानाको लागि अनलाइन किनमेलले तपाईंलाई उपलब्ध खानामा मात्र टाँसिने र अन्य कुनै खानामा प्रतिबन्ध लगाउँछ। पूर्वनिर्धारित सूचीमा खाना खरिद गर्नाले तपाईंलाई तौल घटाउन मद्दत गर्छ किनभने सूचीकृत खानाहरू मात्र खरिद गरिनेछ। तसर्थ, अनलाइन स्टोरहरूबाट खाना किन्न यो लायक छ।
के तपाई केहि वजन कम गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले बिहान अण्डा खाने प्रयास गर्नुपर्छ किनभने अनुसन्धानका अनुसार बिहान अण्डा खाने मानिसहरूले नखानेहरूको तुलनामा 60% बढी तौल घटाउँछन्।
वर्कआउट पछि सधैं दूध पिउनुहोस् किनभने कसरत पछि सेवन गरिएको दूधले खपत हुने क्यालोरीको मात्रा कम गर्छ किनभने यसको अधिकांश शरीरमा जम्मा हुनुको सट्टा मांसपेशी मर्मतमा प्रयोग हुन्छ।
मेटाबोलिज्मले तपाईंको शरीरमा अतिरिक्त बोसो उपभोग गर्न मद्दत गर्दछ। खाना र पेयहरू खानुहोस् जसले तपाईंको चयापचयलाई बढावा दिन्छ जसले बदलामा वजन घटाउँछ। खानाहरू खाने प्रयास गर्नुहोस् जसले तपाईंको रक्त वाहिकाहरू फैलाउँछ र तपाईंको चयापचयलाई बढावा दिन्छ।
कम क्यालोरी डेयरी उत्पादनहरू जस्तै ग्रीक दही खानु र चिनीले प्याक गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नु तौल घटाउने निश्चित तरिका हो। उच्च क्यालोरी खानेकुरा र पेय पदार्थहरू कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
चुकन्दर एक एन्टि-अक्सिडेन्ट हो जसले खानाको समयमा खपत हुने बोसोको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ। यदि तपाइँ बर्गर जस्ता खानेकुराहरू खाँदै हुनुहुन्छ जसमा बोसोको मात्रा धेरै हुन्छ भने, तपाइँको खानामा चुकन्दर थप्नुहोस्।
उजु बेकी भन्छन्:
अप्रिल 29, 20226मा: 28 बजे
तपाईको शिक्षाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तर मेरो प्रश्न यो हो: कसरी बीटरूट वजन घटाउन सक्छ